U dir saaxiib si aad uhesho CHPW - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > U dir saaxiib CHPW
U dir saaxiib CHPW
Sida daryeelka iyo caymiska aad naga hesho? Naga caawi sidii aan u faafin lahayn!
Kaliya dhagsii badhanka hoose si aad ugu dirto emayl saaxiib ama xubin qoyskaaga ah oo u sheegaya qorshooyinka caafimaadka bilaashka ah ama qiimaha jaban ee CHPW. *
U gudbi saaxiib hadda ➜
Ma ogtahay inaad tahay xubin ka tirsan CHPW Apple Health, waxaad heleysaa barnaamijyo iyo faa iidooyin dheeri ah oo kugu kacaya $ 0? * Muraayadaha indhaha oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay dadka waaweyn, abaalmarinta kaarka hadiyadaha ee uurka iyo booqashada cunugga, iyo wax badan oo dheeri ah! Faahfaahin ka hel chpw.org/chpw-faa'iidooyinka-plus/.
Waad ogtahay baahidaada caafimaad inay kafiican tahay qofkasta. Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington, waxaan dhagaysanaa oo aan ku daryeelnaa xaruntaada kugu hareeraysan. Haddii aad waayo-aragnimo weyn kula soo kulantay CHPW, miyaad jeclaan lahayd inaad nooga tagto dib u eegis? Waxay qaadan doontaa oo keliya dhowr daqiiqo. Faallooyinka ayaa naga caawinaya inaan adiga iyo xubnaheenna mustaqbalkaba aan siino adeeg ka sii wanaagsan.
Ku qor dulmar Google Ku qor dib u eegis Yelp
* Waa inuu buuxiyaa shuruudaha u-qalmitaanka
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Maarso 29, 2021